Leefida farjiga iyo dhuuqida xubinta ninka culimada maxay ka qabaan? - iftineducation.com
Leefida farjiga iyo dhuuqida xubinta ninka culimada maxay ka qabaan?
iftineducation.com – Leefida siilka iyo dhuuqida guska ma jiri jirin waagii hore, sidaa daraadeed salafka kama hadlin mas’aladan, waxaa ugu horreyey qof tilmaamo leefidda farjiga caalim maaliki ah oo la dhaho Asbagh (tafsiirka qurdubi) wuxuu yiri : ninka waxaa u bannaan inuu carrabkiisa ku leefo farjiga, culimada casrigan jooga way isku khilaafeen Sh.
Saalax luxaydaan wuxuu yiri : siilka in la leefo ama guska la dhuuqo waa xaaraan wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay falkaas xayawaan shaqadiisa, wuxuu kaloo yiri ninka iyo naagta marka ay kacsadan waxaa ka timaado madyi (kuulato) waana nijaas ruuxa ma garan karo marka ay ka imaanayaan biyahaas, marka haddii uu leefo ninka siilka ama naagta ay jiqdo guska waxaa afka u galaya najaaso marka waa xaaraan
laakin Sh. Cali Jumca iyo Sh. Salmaan Cowda iyo Sh. Khaalid Cabdilmuncim Arrifaaci way baneeyeen inuu ninka leefi karo naagtana dhuuqi karto waxay daliil ka dhigteen nusuusta guud ahaan ku soo aroortay inuu ninka naagtiisa u bannaantahay wixii sharciga diiday mooyee.
3 Meel oo ay Gabdhaha raaxo ka helaan marka laga dhuuq